ဘာရေးရေး ဘာတင်တင် Add Me ရေးနေတဲ့သူတွေကို ကျိန်စာတိုက်လိုက်တဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ – Askstyle
ဘာရေးရေး ဘာတင်တင် Add Me ရေးနေတဲ့သူတွေကို ကျိန်စာတိုက်လိုက်တဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ
သက္သက္ေဇာ္လို႔ အမ်ားသိၾကတဲ့ေဆာင္းဝတ္ရည္ေမကေတာ့ MRTV-4 ရဲ႕မင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အညီ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားစြာမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးခင္ကမွ Eden Challenge ဆိုတဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲေလးကိုလည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွာသြားေရာက္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါေသးတယ္။
လက္ရွိ႐ုံတင္ျပသေနတဲ့ Players ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမွာလည္း ခပ္မိုက္မိုက္ေကာင္မေလး ေမသရဖီေက်ာ္ေနရာကေန ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။အားေပးဝန္းရံသူပရိသတ္ေတြမ်ားလြန္းတဲ့ တုတုကေတာ့ သူေရးတင္သမွ် ပုံတင္သမွ်ပို႔စ္ေအာက္ေတြတိုင္းမွာ Add Me ေရးေနတဲ့သူေတြကို Valentine’s Day က်ိန္စာတိုက္လိုက္တာပါ။ “ဘာေရးေရး စာေသခ်ာမဖတ္ဘဲ.. Follow လုပ္ထားလည္းရေနတာကို cmmts မွာ add Me ကိုပဲ အေၾကာင္း(၃၉)ခါေလာက္ ဆက္တိုက္ေရးတဲ့သူေတြ ဒီဘဝႀကီးမွာ FA အၿမဲျဖစ္ပါေစ… ဒါဟာ ငါ့ရဲ႕ Valentine’s Day က်ိန္စာ… ဒီ Post ေအာက္မွာပါ Add Me ထပ္ေရးရင္ ဘဝဆက္တိုင္း FA ျဖစ္ကြာ.. မယုံရင္ လာေရးၾကည့္” ဆိုၿပီးေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ေဖ့ဘြတ္ခ္ရဲ႕ထုံးစံအရ အေကာင့္တစ္ခုကို သူငယ္ခ်င္းအေယာက္(၅၀၀၀)သာလက္ခံတာမို႔ ပရိသတ္အမ်ားႀကီးရဲ႕အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို ရထားတဲ့တုတုအတြက္ေတာ့ အကုန္လုံးကို လိုက္ Add ေပးဖို႔ဆိုတာ အဆင္မေျပတာမို႔ တုတုကေတာ့ Follow လုပ္ထားလဲရေနတာကိုဆိုၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေဖ့ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဆယ္လီကမာၻပရိသတ္ႀကီးေရ.. တုတုကေတာ့ Add Me ေရးရင္ FA အၿမဲျဖစ္ပါေစတဲ့ေနာ္။
“ဘာရေးရေး ဘာတင်တင် Add Me ရေးနေတဲ့သူတွေကို ကျိန်စာတိုက်လိုက်တဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ”
သက်သက်ဇော်လို့ အများသိကြတဲ့ဆောင်းဝတ်ရည်မေကတော့ MRTV-4 ရဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အညီ ဇာတ်လမ်းတွဲများစွာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မကြာသေးခင်ကမှ Eden Challenge ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုလည်း ရှမ်းပြည်နယ်မှာသွားရောက် ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။
လက်ရှိရုံတင်ပြသနေတဲ့ Players ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်း ခပ်မိုက်မိုက်ကောင်မလေး မေသရဖီကျော်နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။အားပေးဝန်းရံသူပရိသတ်တွေများလွန်းတဲ့ တုတုကတော့ သူရေးတင်သမျှ ပုံတင်သမျှပို့စ်အောက်တွေတိုင်းမှာ Add Me ရေးနေတဲ့သူတွေကို Valentine’s Day ကျိန်စာတိုက်လိုက်တာပါ။ “ဘာရေးရေး စာသေချာမဖတ်ဘဲ.. Follow လုပ်ထားလည်းရနေတာကို cmmts မှာ add Me ကိုပဲ အကြောင်း(၃၉)ခါလောက် ဆက်တိုက်ရေးတဲ့သူတွေ ဒီဘဝကြီးမှာ FA အမြဲဖြစ်ပါစေ… ဒါဟာ ငါ့ရဲ့ Valentine’s Day ကျိန်စာ… ဒီ Post အောက်မှာပါ Add Me ထပ်ရေးရင် ဘဝဆက်တိုင်း FA ဖြစ်ကွာ.. မယုံရင် လာရေးကြည့်” ဆိုပြီးရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖေ့ဘွတ်ခ်ရဲ့ထုံးစံအရ အကောင့်တစ်ခုကို သူငယ်ချင်းအယောက်(၅၀၀၀)သာလက်ခံတာမို့ ပရိသတ်အများကြီးရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရထားတဲ့တုတုအတွက်တော့ အကုန်လုံးကို လိုက် Add ပေးဖို့ဆိုတာ အဆင်မပြေတာမို့ တုတုကတော့ Follow လုပ်ထားလဲရနေတာကိုဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ.. တုတုကတော့ Add Me ရေးရင် FA အမြဲဖြစ်ပါစေတဲ့နော်။